Yisiphi isimo esinobungane kakhulu kubhayisikili? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Izizwe ezinobungane zebhayisikili - ungayilungisa kanjani
Izizwe ezinobungane zebhayisikili - ungayilungisa kanjani
Yisiphi isimo esinobungane kakhulu kubhayisikili?
(upbeat Intro music) - Sekuyisikhathi leso futhi emjikelezweni weBiennale, lapho iCopenhagenize.eu imemezela abawinile nabaphumelelanga emhlabeni wezinyathelo zokuqapha amabhayisikili edolobheni futhi kulokhu kunezimanga ezithile. Ngaphambi kokuthi siqale, sicela unikeze lo mbhalo isithupha esikhulu uma ungakenzi njalo, bhalisela isiteshi.
Manje njalo eminyakeni emibili, iCopenhagenize.eu ithatha isikhathi emsebenzini wansuku zonke wokuhlela, ukuklama nokuhlaziya ingqalasizinda yasemadolobheni ukuhlanganisa inkomba yokuthi amadolobha emhlabeni wonke anciphise kanjani amaphuzu ngokuya ngemingcele eyahlukahlukene yamabhayisikili , Eziyi-14 zazo ziqonde ngqo. Manje sesikhishwe inkomba yabo yesihlanu kanti eyokuqala izophuma futhi ngo-2011.
Sicabange ukuthi manje kuzoba yisikhathi esihle sokwethula kuma-top 10 amasha. Ngaphambi nje kokuthi siqale ngabangu-10 abahamba phambili, ngicabanga ukuthi uBogota kufanele kukhulunywe ngaye endaweni ka-12. Ngabe sizobona ukunyuka okukhulu kotshalomali edolobheni ngemuva kwesigameko sika-Egan Bernalat kulo nyaka iTour De France? 'Lo ngumsebenzi owenziwa masonto onke ovala amakhulukhulu emigwaqo yedolobha nezimoto, okushiwo ukukhuphuka kwabo okuphezulu kuma-20 aphezulu.
Inhloso yedolobha ukuthi bonke abahlali babe nendlela yokujikeleza ngaphakathi kwamamitha ayi-500 ukusuka emnyango wabo. IHelsinki isendaweni yesi-10 ngamaphuzu angama-59%, ukweqa okukhulu kusuka endaweni ye-18 ngonyaka owandulele. Manje sebenamabhayisikili ayizinkulungwane ezintathu nohhafu kulo lonke idolobha, kanti iHelsinki izibophezele ekubeni yidolobha elikhulu kunawo wonke emhlabeni kwezokuthutha okusimeme.
Ngokunikwa ukuthi bahlala bekhithika njalo ebusika njalo, lokhu kuyinjongo encomekayo. Njengamanje unamakhilomitha we-1,300 womzila womjikelezo futhi ufuna ukwakha ingqikithi yamakhilomitha ayi-160 emigwaqo emikhulu yomjikelezo engaphazanyiswa. Okwamanje bangu-20 kuphela.
Kepha kuyisibonakaliso esicacile sezinhloso zabo ngekusasa. IVienna isendaweni yesishiyagalolunye futhi ibikhuphuka ngokushesha kusukela ngo-2015 ngama-60.7% enkombeni.
Izinhlelo zakamuva ezifana ne-hashtag, kungani ungagibeli ibhayisikili, zisizile ngempela ukukhulisa ukuthandwa kwamabhayisikili kulo lonke idolobha. Angu-300 amabhayisikili emithwalo athe athengwa ngisho ngoxhaso lwezinkampani zendawo. Sekuyisikhathi eside amabhayisikili ezimpahla ethandwa eVienna ngoba angaqashwa mahhala kubantu bendawo abafuna ukuwasebenzisela ukudiliva okunzima futhi angahanjiswa ngebhayisikili elijwayelekile.
Ngabe ama-racks wamabhayisikili ama-5 000 azwakala kanjani ngathi akhiwe eminyakeni emibili edlule? IParis isendaweni yesishiyagalombili Kusukela ngo-2011, iParis ihlupheke kancane uma iqhathaniswa namanye amalungu ale kilabhu ephezulu eyishumi; manje sekuyizindawo ezimbili ezansi kunesikhathi sabo sangaphambilini sesikhathi sonke sesithupha. Kodwa-ke, ziphakeme kakhulu kunesikhundla sazo esibi kakhulu se-19. Amaphuzu kulokhu angama-61.6%, okukhombisa izinto ezimbili ukuthi amanye amadolobha asebenzela kangakanani ukuhambisa amabhayisikili, okusho ukuthi noma ngubani ongaqhubeki nokuthuthukisa ingqalasizinda, lokhu izokuwa ngasendleleni.
Kubonisa nokuthi uma uzibophezela ohlelweni olulodwa, ungayibuyisa ngokushesha le miphumela. IParis njengamanje inamabhayisikili aqashisayo angaphezu kwe-14,500 kunethiwekhi yayo, asetshenziswa ngamalungu wenkonzo ayi-150,000. Kepha kuningi okufanele kwenziwe.
Njengamanje, u-5% kuphela wohambo olwenziwa ngebhayisikili, okukude kakhulu nenhloso yabo engu-15% ngo-2020, okokugcina lapho beqeda khona i-19 kanti kulokhu bakhuphuke kakhulu baya ku-62.5% kubhodi yabaphambili noma enkombeni. Emadolobheni anamagquma, anobusika obuhle, i-Oslo ingamandla aholayo afakazela ukuthi isimo sezulu nesimo sezulu akufanele kube izaba zokugwema izindlela zokuthutha eziqhubekayo.
Izimoto zivinjelwe ukusuka enkabeni yedolobha, isikhungo esiwu-comma amakhilomitha-skwele amathathu kude, nezindawo zokupaka izimoto eziyi-1 000 zisuswe eVienna kukhona nemixhaso yokuthengwa kwamabhayisikili e-cargo futhi kutshaliwe futhi kwenziwe nokupaka amabhayisikili okuphephile. Kuthiwa iSykkel Hotell. Futhi uma ukhathazekile ngokushayela ebusika, amabhayisikili abo wokuqasha angama-400 avela kuhlelo lokwabelana afika namathayi agcwele.
Endaweni yesithupha, u-68.8% wamaphoyinti asenkombeni aya eBordeaux endaweni yesithupha. Ngaphandle kwamakhilomitha angama-35 kuphela ezindleleni zomjikelezo ezinikezelwe, u-13% walo lonke uhambo lwenziwa ngebhayisikili.
Kunezindawo ezithile zedolobha lapho izimoto sezivinjelwe manje, okubone ukusetshenziswa kwamabhayisikili kulezi zindawo kukhula ngo-20%. Uma ucabanga ukuthi ama-trams nabahamba ngezinyawo basasebenzisa indawo efanayo, leso yisibalo esimangalisayo. Kodwa-ke, eminye imizila yamabhayisikili, izindawo zokupaka kanye namabhayisikili aqashisayo kuyadingeka ukwenza ngcono, kepha kuze kube manje babambe indawo ezinzile kwabaphezulu abayishumi.
Owesihlanu kuhlelo lokuqala, owesithupha, owesithupha nowesithupha futhi endaweni yesihlanu, nendawo eyodwa engaphansi kwesokugcina iStrasbourg. Kungukungena kwethu kokuqala ngaphezu kwama-70% enkombeni. U-16% wabo bonke abahlali njengamanje abaya emsebenzini ngebhayisikili, ukulethwa kwamadolobha amaningi manje sebesebenzisa ibhayisikili lezimpahla esikhundleni sendlela yendabuko yeveni.
Idolobha ligxile kakhulu ekususeni izimoto nasekuletheni indawo ephephe kakhulu yabahamba ngezinyawo nabagibeli bamabhayisikili ngokufanayo. Endaweni yesine, futhi esivele inenqubekela phambili engaguquki, yi-Antwerp. U-73.2% enkombeni Ohamba ngebhayisikili ogibele i-Antwerp Zeehaven Railway, uzokwazi ukuthi isithiyo esikhulu kuleli dolobha laseBelgium empeleni sishayela kujantshi wesitimela nethilamu.
Manje cishe wonke amahlaya eceleni, nginenye ngomzuzu, ama-33% ohambo e-Antwerp enziwa ngebhayisikili. nasenkabeni yedolobha manje kunomkhawulo wejubane ojwayelekile wamakhilomitha angama-30 ngehora ngezizathu zokuphepha. I-Antwerp nayo inendawo yokupaka izimoto enkulu kunazo zonke eYurophu ngaphansi komhubhe waseKennedy.
Lokhu kwaziwa nangokuthi umgwaqo onguthelawayeka u-E17 A14. Ihlaya lelo. Ngakho-ke mhlawumbe akumangazi ukuthi bafuna ukukhulula enkabeni yedolobha kulesi siminyaminya esivuna ingqalasizinda yebhayisikili eligeleza ngokukhululeka.
Manje sekuthathu okuphezulu futhi kusondele phezulu. I-Utrecht empeleni ibuyela endaweni yesithathu, kepha ukugqamisa ukuthi zisekude kangakanani lezi zintathu eziphezulu, i-Utrecht ithole isamba esingu-88.4% senkomba.
Sengihlale ngaphandle kwedolobha iminyaka manje futhi sengiyazi kahle le ndawo, ngakho-ke ukubiza ingqalasizinda yokuhamba ngamabhayisikili esigabeni somhlaba saseNetherlands akusona isisekelo. Ngempela bekungeke kube lula ukwenza imisebenzi yakho yansuku zonke, imisebenzi yasekhaya, nokuhamba kwenziwe ngezinye izindlela. Noma kunjalo, izikhathi ziyashintsha.
Ukuze uhlale phezulu, kufanele uye phambili. Amarobhothi e-Smart traffic amisa ezinye izimoto futhi abe luhlaza kubagibeli bamabhayisikili azoguqula impilo ngokwethembeka njengoba kucatshangwa ukuthi ukuhamba ngebhayisikili kwamahhala eNetherlands. Zihlolwe zahlolwa ezindaweni ezahlukahlukene kanti kulindeleke ukuthi zisetshenziswe kakhulu emadolobheni.
Izinhlelo ze-Utrecht zekusasa zigxile ekupakweni kwamabhayisikili, okuzokwenza kube lula nakakhulu ukuthi abantu bendawo bakwazi ukufinyelela enkabeni yedolobha lezivakashi. Ungacabanga ukuthi isiteshi esikhulu sesitimela sizobukeka kanjani ngezindawo zokupaka amabhayisikili ezicishe zibe ngu-33,000? Ngaphezulu kohlu lwethu, futhi yebo ngiyazi engisanda kukusho, i-Amsterdam ayikaze iwele kwabathathu abahamba phambili futhi uma uke waba khona kungaphezu kokuqondakalayo, i-Amsterdam igxile ekhonweni eliyisixuku esikhulu sabagibeli bamabhayisikili futhi ukuphuma edolobheni ngokushesha nangempumelelo usuku ngalunye kubizwa ngokuthi yimiphi imigwaqo emikhulu yamabhayisikili, imizila yasebukhosini. Ama-moped kufanele avinjelwe emizileni yamabhayisikili, okuyinkinga enkulu ezingxenyeni zeHolland neBelgium.
I-Amsterdam nayo ithola izindawo zokupaka ngokufaka esikhundleni sezindawo zokupaka amabhayisikili. Izindlela zomjikelezo ziyandiswa ukuze ukugeleza kube lula kubo bonke abasebenzisi, futhi izimpawu kufanele zenziwe ngcono. Ngokuzayo, ungaziphoqa ubuyele endaweni yokuqala? Phezulu kuhlu lwethu yiCopenhagen.
Ngama-90.2% enkombeni, iCopenhagen ingeyesithathu eRow, idolobha elilinganiswe kakhulu lokuhamba ngebhayisikili emhlabeni. Kuthiwani ngezinye izibalo zeCopenhagen? Ama-62% ohambo lwabo lokuya esikoleni noma emsebenzini namuhla enziwa ngebhayisikili, okuyinto enhle kakhulu.
Kunamabhuloho amaningi akhiwe noma asakhiwa kulo lonke idolobha ukunciphisa izikhathi zokuhamba nokususa abagibeli bamabhayisikili. Ama-euro angama-40 umuntu ngamunye asetshenziswa minyaka yonke kwingqalasizinda yokuhamba ngamabhayisikili, okuqinisekisa ukuthi kuhlala kuyindlela yokulinganisa kuwo wonke amanye amadolobha. Imizila yamabhayisikili ebanzi engamamitha amahlanu nengxenye yenza ukusetshenziswa okuphephile nokunethezeka kubo bonke abagibeli bamabhayisikili.
Ngokusobala, iCopenhagen iyakwazi abakwenzayo. Ngakho-ke unayo, iCopenhagenize.eutop imizi eyi-10 yokuhamba ngebhayisikili emhlabeni jikelele.
Ngabe uneziphakamiso zamadolobha ocabanga ukuthi kufanele? uzokwenza ukuthi ube phezulu kwabangu-10 noma abangu-20 ngokuzayo? Baphose kumazwana angezansi nangezinye izindatshana zamabhayisikili ezedolobha chofoza lapha ngezansi.
Yisiphi isimo e-United States okuyisimo esincane kakhulu esinobungane bamabhayisikili?
Ngakolunye uhlangothi, i-Nebraska ine-okuphansi kakhuluamaphuzu wengqalasizinda kanye noxhaso ezweni futhi hhayi ezweni lonkeibhayisikiliplan, izici ezimbili ezinkulu endaweni yokugcina.
Yini engalungile ngawo wonke umuntu? Uyemukelwa emhlabeni, ngokusho kukaBriggslet, ngemuva kokuthi ngilayishe udaba olumayelana namadolobha ajabule kakhulu e-United States emasontweni ambalwa edlule, uBriggslet wenza esinye isihloko esijabulisayo. Ukunquma ukuthi yiziphi izinto ezenza umuntu ohlala esifundazweni ojabulayo, amafemu amaningi ahlukene ocwaningo ayavuma, ukuthi inhlolovo esilinganisweni sinye kuya kwabayishumi yabuza abantu ukuthi balinganisa kanjani imisebenzi yabo impilo yabo yezenhlalakahle exhaswa umphakathi kanye nempilo yomzimba enquma ukuthi inhlalakahle yabo ilingana kanjani nenjabulo ingxenye enkulu yabantu sesithathe izifundazwe ezihlale zisezingeni eliphakeme labangu-10 bonke abanye babonakala benze ucwaningo oluncane futhi basenza saba ukuphela kombuso wokuthi wonke umuntu kulo lonke uhlu uvumile ngazo zonke lezi zinhlu, kufaka phakathi lokhu eyodwa, wonke umuntu ufuna ukujabula njengomuntu silwela ukujabula sinakho futhi kumthethosisekelo wethu wengeze ukufuna injabulo ne Ngakho ake sibone ukuthi isiphi isimo esenza lokhu kushushiswa kube lula kakhulu kunombolo Number 10 Connecticut Connecticut owayengungqongqoshe isikhashana ngo-1636 wabalekela e-england ukuze enze ukukholwa kwakhe ngokukhululeka, washiya iBoston ngamalungu ewadi yakhe ayikhulu futhi wagcina lapho iHartford connecticut ikhona namuhla, ngangizibuza njalo ngalokhu kokugcina Igama emuva ngaleso sikhathi abantu babebizwa ngokuthi abenzi bensimbi ngoba babengabenzi bensimbi noma abaphuza utshwala ngomsebenzi ingabe umndeni uthatha kanjani i-hooker njengesibongo angikwazi ngisho nokuqhubeka nesichasiselo umbuso womthethosisekelo unabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-3.5 futhi iningi libonakala lijabule.
Babeka ezingeni eliphezulu uma kukhulunywa ngempilo, imvelo kanye nemfundo. Izinga lokuphepha lihle kakhulu futhi, ngaphandle kweHartford namanye amadolobha ambalwa lapho ubugebengu buphansi kakhulu ezweni lonke. Yindawo enhle yokuhlala empilweni yakho.
Vakashela lesi sifundazwe kanye ngesikhathi sokuwa umbuso wonke womthethosisekelo udlula cishe zonke izifunda ezinamahlamvu awile kuphuzi ngokubomvu kwegolide kuyinombolo emangalisayo i-coloradocolorado eyisishiyagalolunye iyikhaya lezintaba eziphakeme kunazo zonke ezweni futhi inokuphakama okuphezulu kakhulu kwanoma yisiphi isimo uma ufa Njengaphandle okukhulu, leli yipharadesi lakho lokuqwala izintaba ngezintaba zokugibela ibhayisikili noma ukubuka nje emvelweni ngoba uzonda umsebenzi wakho i-colorado ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokwenza konke lokhu i-colorado inenye yezomnotho ongcono kakhulu nezakhamizi banemisebenzi yabo banelisekile kusobala ukuthi imvelo yemvelo kulesi simo isiza ngenjabulo ejwayelekile futhi unezinga eliphansi impela lesehlukaniso uma kukhulunywa ngempilo yezenhlalo e-colorado kubonakala sengathi bajabule kakhulu nabangani bakho nomndeni wakho bonke abantu engibaziyo abavela ku-colorado Muhle impela futhi ubonakala esondelene kakhulu nemindeni yabo, ngokumangazayo abantu abaningi engibaziyo baseFlorida bagwema amalungu omndeni wabo ngazo zonke izindlela angazi f lesi yisihloko se-florida noma yini elandelayo naso, kodwa idlanzana labantu engibaziyo abazalelwa futhi bakhulela e-flida alikho nje emndenini wakho, kuyinombolo eyisishiyagalombili ye-alaska ungqongqoshe wezangaphandle ngo-1867 williamseward wathenga i-alaska kusuka i-russia ngamadola ayizigidi ezingama-7.2 cishe ama-2 cents i-acre abantu abaningi babecabanga ukuthi lokhu kuyisenzo esiwubuwula futhi baqala ukusibiza ngokuthi seward bewulawula bashintsha imizwa yabo lapho kutholakala igolide i-yukon futhi futhi futhi nabantu baqala ukuthutheleka endaweni ngawo-1890s njengayo kwakuyisitolo esikhulu sama-apula ngosuku lokwethulwa kwaso kwaba yiminyaka engama-70 kamuva, ngo-1959, eminyakeni engama-61 kamuva, kwakungekho muntu ohlala lapho, namanje ababaningi abantu abahlala e-Alaska yindawo enhle ngokumangazayo, banehlane elingaphezulu kokwazi kwabo, ukuthi benzeni nge-Alaskan baneliseke kakhulu ngekhwalithi yabo yokuphila kunemvelo kanye neziqinisekiso zezimali zomuntu siqu zezinto ezimbili ezibaluleke kakhulu abantu abazibhalayo ukuthi kungani bejabule kakhulu kulesi simo Uyazi ukuthi akuwona umnotho omkhulu e-U States, kepha akusikho ukuthi bonke baphambi kwabanye, manje ohlangothini lwami banesimo sezulu esingesihle ngempela kepha abanye abantu bayasijabulela, ngingomunye walabo bantu abayi-7 massachusetts a Ucwaningo lwe-2019 lwe-US efunde kakhulu
Amazwe abeka iMassachusetts njengenombolo yokuqala yokuhalalisela unezingqondo ezinkulu bahlaziya amamaki esikole kanye nezinga lezemfundo kanye nezinye izinto eziningi futhi abantu bazizwa beqine kakhulu ngabo futhi baba sezingeni eliphakeme kakhulu cishe kuyo yonke inhlolovo yemfundo oyibonayo noma oyifundayo kakhulu ungacabanga ngamathuba emisebenzi Imfundo nokuzinza kwezezimali kukhulu eMassachusetts nabantu abanakho Lokhu kukalwe kakhulu ezindaweni eziningi zokuvota, iBay State inamanye amanyuvesi aphambili kakhulu ezweni njengeHarvard neMit, kepha ngisho namakholeji amancane nezikole eziphakeme thola amamaki amahle kakhulu wokuthi abahlali bazizwa kanjani ngezikole, futhi-ke uzoyeka ukuthayipha unezikole ezimbalwa ezimbi ngakho-ke iningi lezikole kulesi sifundazwe zivelele ngakho-ke masikwenze angifuni ukuzwa ukuthi simbi kangakanani isikole sakho kwaba, cishe kunzima ukuba yisiphukuphuku futhi ungafundile kulesi sifundazwe esisodwa noma yini eyenza izakhamuzi zaseMassachusett zijabule kakhulu ngendlela izimpilo zazo ezihamba ngayo kwinombolo yazo x state idaho ukube izwe eliyigugu belingelikhulu kangako futhi abantu bengajabule kangako, i-idaho ibingeke ibe nabantu abaningi baseCalifornia abafudukela lapho, yehle kancane ku-2019, kepha isengenye yezindawo ezihanjiswe kakhulu Ababaleki baseCalifornia nami bacabanga ukuthi ukuphela kwento eyenza umfana ophakathi we-spud abe lusizi - bayakuzonda lapho bebona ipuleti lelayisense laseCalifornia futhi bangabatsheli ukuthi bavela eCalifornia - iMississippi iyisibonelo esihle, ngokusho kombiko ka-2018 yi-Outdoor Industry Association. I-Idaho inelinye lamaphesenti aphakeme kakhulu labantu abangama-79 ababamba iqhaza emisebenzini yokuzilibazisa ngaphandle lapho iColorado neCalifornia kuphela enamaphesenti aphezulu ngemisebenzi esukela ekuhlanzeni kwamanzi amhlophe kuya ekudobeni izinhlanzi. Akukho ukushoda kwezidlakela kulesi simo.
Uphakeme kakhulu esigabeni sesehlukaniso kepha konke okunye kuhle futhi izakhamizi ziyasithanda lesi sifundazwe futhi zibonakala zijabule kakhulu Inombolo yesihlanu iTexas izwe elinenkanyezi enesizungu lingena ngenombolo yesihlanu ngithole inhlolovo ebabuze abantu uchungechunge lwe futhi ekugcineni bacele wonke umuntu ukuthi abhale phansi into eyodwa eyenza izimpendulo ezinhle zaseTexas kwakungabantu bezinja zezemidlalo nama-tacos ahlala eTexas kusho ukufinyelela okungenamkhawulo ku-barbecue emangalisayo yaseTexas engikhulume ngayo ngaphambi kokuthi ngithande ukugcoba nokuba yiTexas enye yezindawo ezinhle zokuyithola ukulinda isikhathi esingaphezu kwehora ukuthola indawo abayithandayo ye-BBQ Labo engiye kubo kungenzeka balinde isikhathi eside, abantu banemisebenzi eTexas futhi ngokwesilinganiso bahola kangcono kunezindawo eziningi ezisengxenyeni yezwe elenza ukuthi i-Texans ijabule ngumsebenzi , ezomphakathi nezomphakathi - zonke lezi zinto ezintathu zazingaphezu kwesilinganiso sami futhi yilokhu abantu abaningi abakudumisayo, eyokugcina ibimangaza ikakhulukazi uma ubheka izindaba zekhebula. ITexas inamadolobha amabi njengazo zonke izifundazwe, kepha uma uthenga kulokho iziteshi zezindaba ezikutshela khona ungacabanga ukuthi kuyindawo yempi emngceleni waseMexico, akusibona nje abantu abazi ukuthi bajabule futhi baphephile eZweni Labo imiphakathi eyisi-4 yaseCalifornia ngakho manje abantu abachitha isikhathi esiningi belalela ama-podcast ezepolitiki nemibukiso yomsakazo babubula. Ngibhala futhi nengqondo eshukumisa ingqondo impela njengoba ngikhuluma.
Nansi into iCalifornia inezinkinga eziningi njengazo zonke izifundazwe zonke izifundazwe zinamakhaya eCalifornia ziningi zonke izifundazwe zinentela iCalifornia ibonakala ineziningi kakhulu, kepha abantu basasithanda lesi sifundazwe kubikwe ukuthi abantu abaningi bayaphuma kunakuqala kepha bona zisahambisa abantu abaningi futhi inani labantu lisakhula isimo segolide sinezinto eziningi ezijabulisa abantu isimo sezulu siqala i-online real estate database zillow isebenzise idatha yesimo sezulu esivela olwandle lukazwelonke kanye nokuphathwa komkhathi ukuthola ukuthi yimaphi amadolobha athokomele kakhulu e-United States ngezinsuku ezingama-261 eziduduzayo unyaka wonke iSan Diego yabeka lolu hlu, oluseCalifornia uma kungenzeka ungazi ukuthi kulayini olandelayo kwakuzoba yiLos Angeles kuya kuJose naseSan Francisco. Zonke ZiseCaliforniaTop 4 Ngesimo Sezulu Unethuba Abantu Abaningi Bakholelwa Ukuthi iCalifornia Inikeza Amathuba Amaningi Kunanoma Yimuphi Omunye Umbuso Wezibalo Zomsebenzi Osezingeni Eliphakeme Emvelweni Wezemvelo, futhi Abantu bajabule ngobuhle beCalifornia, izilwandle, ku-Yosemite kuwo wonke umuntu ukuba abalethe enye indawo nabantu abanomsebenzi omuhle bathokozela isimo ozizwa ngaso ukuthi ufuna kanjani kulesi sifundazwe kepha abantu abahlala lapho banenombolo enenhlanhla enkulu iThreemaine Maine yayikuwo wonke ama-sura Top 5 ezindaweni ezahlukahlukene Sabheka abantu baseMaine abathanda umbuso, kusukela ekukhiqizweni okusha kwepulazi kuya ezikhiqizweni zobuciko kuya ezihlahleni ezihlala unomphela. Kunzima ukungajabuli kulesi simo.
Uke wasebenza eNike phambilini futhi wamtshela ukuthi ngokwazo zonke lezi zivivinyo kwakuwuMbuso ojabule kakhulu, wathi, ngabe benza ucwaningo endaweni yezimbadada eHawaii noma okuthile ngoba bonke abantu lapho mhlawumbe babedakiwe futhi bejabule, uthi cha, bakwenzile? konke mayelana nento yonke wathi kulungile mhlawumbe ubuhle bemvelo emndenini futhi bathi imindeni eseziqhingini naseHonolulu isondelene kakhulu, uma ubheka lokhu, kunengqondo, ngakho nami? ukuqagela lokho kunikeza i-hawaii ukunqoba komndeni wombuso ojabule kunabo bonke futhi wonke umuntu uphilile kungaba kubi kakhulu ngakho-ke lolu uhlu lwethu namuhla ngithemba ukuthi uluthokozile ngiyethemba lukujabulisile ungakhohlwa zonke izixhumanisi ezingezansi zinikeze indatshana enkulu isithupha esisodwa uma usithandile ungakhohlwa ukubhalisa uma ungakabi nalo usuku oluhle, yiba mnandi komunye nomunye
Yini eyenza idolobha elinobungane ngebhayisikili?
Futhi lokho kushoibhayisikiliimizila. Ziningi zazo. Futhi hhayi nje ama-sharrows, hhayi imigqa edwetshiwe kukhonkolo, kepha amanethiwekhi axhunyiwe we-barrier-protectedibhayisikiliimizila. Cabangaibhayisikiliukupaka,ibhayisikili-ukuxhunywa kwezokuthutha komphakathi, nezimpawu ezenzelwe ukucatshangelwa nezimpawu zomgwaqo zokuthola indlela nokusebenziseka kalula.
Ingabe iFlorida izwe elinobungane ngamabhayisikili?
Namuhla, i-EFloridaUMnyango Wezokuthutha (FDOT) umemezeleEFloridaibizwe njengelesi-10 kunawo wonkeIsimo Samabhayisikili EsihleeMelika yi-League of American Bicyclists ka-2019.3. 2020.
Ngalesi sikhathi, mhlawumbe uzwile ukuthi abantu abaningi baseMelika bagibela amabhayisikili. Ukuthengiswa kwamabhayisikili kuyanda. Imboni yamabhayisikili ithe ukuthengisa kukhuphuke ngamaphesenti angama-81 ngoMeyi.
Le yinyanga yesibili eqondile ukuthi ukuthengisa kudlule u- $ 1 billion ekuthengweni kwamabhayisikili, okudala ukushoda okukhulu. Ngesikhathi salo bhubhane, amanye amadolobha avale imigwaqo yawo ukuze anikeze abagibeli bamabhayisikili nabahamba ngezinyawo isikhala esithe xaxa sokugcina ibanga lomphakathi. Entwasahlobo nasehlobo lika-2020, izitolo zamabhayisikili zithwale kanzima ukuhlangabezana nesidingo esikhulayo sabagibeli bamabhayisikili abasha.
Kusukela lapho, abathengisi bakwazile ukuthola amasheya abo esimweni. Njengoba kunamabhayisikili amaningi, izithuthuthu, ama-moped kanye nama-scooter emigwaqweni, kusho ochwepheshe bezokuthutha, umzuzu umiselwe ukuguqulwa kwezinto zokuhamba. Konke lokhu ndawonye kwaziwa ngokuthi yi-micromobility.
Ungaba kanjani namabhayisikili amaningi ebhodini Umgwaqo ungaguqula uhlelo lwezokuthutha lwaseMelika. Kunamaqembu amabili abantu asebethathe amabhayisikili ngesikhathi salo bhubhane, labo abawasebenzisela umsebenzi noma ukuthutha, nalabo abawasebenzisela izinjongo zokuzilolonga nokuzilibazisa. UShannon Ng, obhalisele ubulungu beCiti Bike eNew York City kulo Septhemba, ungena ebhakedeni lokuqala.
Kimi, ukusebenzisa ibhayisikili ngokuyisisekelo kusho nje ukusuka endaweni eyodwa uye kwenye. Angizange ngigibele ibhayisikili ngaphambi kwalolu bhubhane ngoba ukuhamba ngebhayisikili kwakusabisa kakhulu eNew York City futhi izimoto zimi yonke indawo futhi ngangibalekela amabhayisikili ngazo zonke izindlela. Kodwa isizathu sokuthi ngishintshe manje ukuthi kunezimoto ezimbalwa futhi ngizwa nje ngiphephe kakhulu ngebhayisikili.
UShannon futhi umele inani elikhulayo labesifazane emsebenzini owenziwa ngabesilisa. ENew York, abesifazane babe ngabasebenzisi abakhulu kunabo bonke bohlelo lokwabelana ngamabhayisikili kuleli dolobha selokhu laqala ngo-2013. Isizathu esikhulu sokwehluka kobulili ukwesaba nokukhathazeka ngokuphepha emgwaqeni, ngaphezu kokuphepha komuntu siqu, kodwa ngaphezu kwakho konke ukuphepha emgwaqeni.
Futhi-ke, kule ndawo lapho kuncane ukuhamba kwezimoto, ngokuqinisekile inamandla okuthola abesifazane abaningi abashayelayo. UCyrus Kolar uhlala eNyakatho Carolina. Wayengagibeli ibhayisikili ngaphambi kobhadane, kepha manje ugibela cishe amahora ayisikhombisa ngesonto ama-gyms ayavalwa.
Ngakho-ke ngathenga izinsimbi, kepha bekungekho ngempela. Ngithole i-cardio eningi ku-basketball futhi ngicabanga ukuthi bengifuna enye indlela yokuzivocavoca umzimba. Ngingashayela isizini eyodwa kuphela futhi lokho kungawa.
Kepha ngicabanga ukuthi ukuhamba ngebhayisikili kungokuzijabulisa nje nokuziqeqesha nje, into engabamba. UKoresi waba nenhlanhla. Wazitholela ibhayisikili lokugijima ngokubheka iFacebook Marketplace, kodwa hhayi wonke umuntu waba nenhlanhla.
Ekuqaleni kobhadane, amabhayisikili amadala angaphansi kwama- $ 200 aqhuba ukuthengiswa kwamabhayisikili ngaphezu kwamaphesenti angama-203 unyaka nonyaka. Ukuthengiswa kwebhayisikili ezintabeni ezinganeni kukhuphuke ngamaphesenti angaphezu kuka-150. Amabhayisikili akhule ngamaphesenti ayi-107.
Ngemuva kwalokho, ngoJuni 2020, ukufunwa kudluliselwe kumabhayisikili anenani eliphakeme elinganiselwa ngaphezulu kwama- $ 1000, njengamabhayisikili omgwaqo, wezintaba, nogesi. IVanMoof iphindwe kathathu ukukhiqizwa kwayo ngokulindela ukukhula, kepha lokho bekunganele. UCovid ushintshe okuningi kithi njengenkampani.
Kubize ukufunwa okuningi. Isidingo okwamanje siphezulu kakhulu kunomkhiqizo. Ukukunika umbono.
Ngicabanga ukuthi besinezidingo eziphindwe kasithupha kwikota yesibili ka-2020 kunango-2019. Sisebenze kakhulu kunakuqala esake sasebenza ezimpilweni zethu. Ngizama nje ukuhambisana nezinto.
Uyazi ukuthi i-Specialized icishe ibe neminyaka engama-50 ubudala. Ngakho-ke akukhona ukuthi awekho amabhayisikili, kuya ngokuthi iyiphi ibhayisikili oyifunayo. Ingqalasizinda yokuhamba ngamabhayisikili e-United States isalela ngemuva kwamazwe aseYurophu nakwamanye amazwe lapho ukuqhutshwa kwamabhayisikili sekuhlanganisiwe ezinhlelweni zawo zokuhamba.
Nezimoto azisavamile eMelika ngesizathu esikhulu. Kuseseyindlela ejwayelekile yokuhamba. Futhi empeleni, lokhu futhi kunomthelela omkhulu ekuxhasweni nguhulumeni kanye nakwezombusazwe zombuso.
Kuze kube ngo-1991 cishe zonke izimali zikahulumeni zangena ekwakheni imigwaqo emikhulu, niyazi, izimoto nokuhamba komphakathi. Kungokokuqala ngqa ngo-1991 ukubona amadola ambalwa enikezwa ezokuthutha okusebenzayo, ukuthuthukiswa kokuhamba ngebhayisikili nokuhamba ngebhayisikili. Kusukela lapho, sibone imali eningi enomthelela othile ekwakhiweni kwengqalasizinda ephephe kakhulu yabagibeli bamabhayisikili.
Amadolobha asevele anemali futhi ahlela ukuqala ukukhulisa inethiwekhi yawo yokuhamba ngamabhayisikili ngaphambi kobhadane ukuze akwazi ukuthatha isinyathelo ngokushesha uma intshisekelo yamabhayisikili inyuka. ISeattle yayingenye yalezo zindawo. Bekungomunye futhi wemiphakathi yokuqala ukumemezela ukuthi lwenza uhlelo lwalo lweStreetHealthy Streets olungamamayela angama-20 lube unomphela, uhlelo oluvumela izakhamizi ukuthi zihlale ngaphandle ngenkathi zigcina ibanga lomphakathi.
Kusenesikhathi ekuqaleni kobhadane sinqume ukusebenzisa eminye yemigwaqo esakhelene nayo, iNeighborhood Greenways yethu, njengoba sibabiza kanjalo, kuphela ukufinyelela kwendawo nokuyivala ezimotweni ezidlulayo nokuyivulela abahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisikili. Futhi lokhu kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuba nobulungiswa emphakathini kanye nokufeza izinhloso ezibalulekile. Futhi sabona ngokushesha okukhulu ukuthi abantu abaningi basemigwaqweni ngezinyawo nangebhayisikili futhi sanquma ukubenza babe ngunaphakade.
Futhi manje sisebenza nemiphakathi ngethemba lokuthi sivela kulo bhubhane ukuthola ukuthi kusho ukuthini ngempela lokho ukwenza lokhu kube unomphela. USeattle akayedwa emhlabeni; amadolobha afana neBogota neBerlin nawo anwebise ingqalasizinda yawo yokuhamba ngamabhayisikili; abanye abanjengoMilan, iLondon neGeneva bengeze imizila yemjikelezo eguquguqukayo yokuhlukanisa abagibeli bamabhayisikili nezimoto e-United States. Amanye amadolobha abone ukululama kancane kancane, behlanganyela amabhayisikili namachibi e-scooter ngenxa yengqalasizinda yamabhayisikili yesikhashana.
Kepha okunye kwezinto esizibonayo kudatha ukuthi lolu hambo empeleni luba lude, engicabanga ukuthi luthakazelisa kakhulu ngoba ngemuva kobhadane, abantu bathatha uhambo olude ngemicroobility eyabiwe futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuhlobene kakhulu nokukhula kwengqalasizinda ukuyixhasa njengemigwaqo ehamba kancane. Ingqalasizinda yamabhayisikili e-United States isukela endaweni yokupaka amabhayisikili evikelekile, imizila yamabhayisikili evikelekile, ama-boulevards amabhayisikili, izindlela nezindlela ezingekho emgwaqweni, izigaxa zethrafikhi, imigwaqo nemizila yamabhayisikili enemigqa yendabuko. Lezi zinto, ngaphezu kwezinto ezifana nezimpawu zomgwaqo wamabhayisikili, sinawo wonke la mathuluzi futhi adinga nje ukuhlanganiswa kumongo ofanele nasendaweni efanele, ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi singalwakha kanjani lolu hlobo lwenethiwekhi.
Asikulungele ngaso sonke isikhathi ukukwenza. Ngo-Mashi 2020, iPortland State University's Transportation Research and Education Center yabheka amadolobha ayisithupha futhi yaqhathanisa ukuthengisa nokuthengisa izihambi, amaholo, nezibalo zokuqashwa ngaphambi nasemva kwamadolobha kungeze ingqalasizinda yamabhayisikili ka-2013 New York Department of Transportation survey kanye nocwaningo lwango-2014 lweSanFrancisco Municipal Transportation Agency. Ngakho-ke sithole ukuthi ezindaweni eziningi, imizila emisha yamabhayisikili, ingqalasizinda entsha yabahamba ngezinyawo ezifundeni zamabhizinisi ivame ukuhlotshaniswa nokwanda kokuthengisa nokuqashwa kwamabhizinisi akule migwaqo.
Ngakho-ke kwezinye izimo awukho umphumela, kepha kuyaqabukela siwubonile umphumela omubi. Ukuxhaswa ngezimali kwengqalasizinda yamabhayisikili kuseyinselelo enkulu. Imali yengqalasizinda yamabhayisikili ngokwesiko ivela kuzintela zikahulumeni nezikahulumeni.
Iningi lemali lingena kwingqalasizinda yezimoto. Abaphikisi bathi njengoba imali ivela enteleni kagesi, kufanele isetshenziselwe ukwenza ngcono ingqalasizinda yezimoto, hhayi amabhayisikili. Lapho imali isitholakele, isinyathelo esilandelayo ukuthola ukuthi ingqalasizinda ingabekwa kuphi.
Lokhu kubekwa kaningi kungahambelana nolayini nobuzwe. Uma ubheka amadolobha ase-US, njengamanje, ingqalasizinda yamabhayisikili imvamisa ayihanjiswa ngokulingana. Ngakho-ke kukhona ucwaningo oluhle laphaya olukhombisa ukuthi okungenani emadolobheni amakhulu, abantu abamhlophe nabahola kakhulu kungenzeka babe nokufinyelela okungcono kwengqalasizinda yamabhayisikili.
Ngakho-ke lokho kufanele kushintshe. Kufanele sisebenze kangcono kakhulu ukuze silingane ngokuhlinzeka ngengqalasizinda efinyeleleka, ephephile yabo bonke abantu. Ngenkathi abantu abaningi baseMelika begibela ibhayisikili phakathi nobhadane, akucaci ukuthi ukuhamba ngebhayisikili kuzogcina ukuthandwa kwayo ngemuva kokuphela kokulinganisa isikhathi sokuhamba sazo zonke izimoto endaweni isikhathi esithile.
Leyo metric yehle ngoMashi 2020. Isibalo sakhuphuka njengoba amadolobha avulwa kabusha ngemuva kokuvalwa kwe-Covid, okuphakamisa ukuthi abantu bathatha uhambo olude ezimotweni zabo futhi kungenzeka ukuthi babuyele emigwaqeni eminyene, amazinga awekho ngokuphelele emazingeni wangaphambi kobhubhane abuyile nezindlela zabahamba ngezinyawo qhubeka nokukhulisa ibhayisikili njengendlela yokuhamba unomphela. Enye yezindwangu zesiliva esizibonayo isifiso esandayo sokuhamba ngebhayisikili nokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngezinyawo.
Enye yezinto esizibikezelayo ukuthi sizobona ingqalasizinda enikelwe ukuhamba okuphephile nokuhamba ngebhayisikili, nokusetshenziswa kwesithuthuthu ukusizakala ngethrafikhi esebenzayo njengendlela yokuhamba. Ngakho-ke uma sibheka lapho senza khona lolu tshalo-zimali lwengqalasizinda, okuningi kuya ngokuthi imigwaqo uqobo idinga luphi utshalomali nokuthi sidinga kuphi ukwakha imigwaqo emisha noma ukwenza imigwaqo evulekile. Futhi uma senza konke okusemandleni ukwenza le migwaqo ihambe ngezindlela eziningi ngenkathi sisalulama kulo bhubhane futhi abantu kufanele bathuthe futhi, sidinga ukuqiniseka ukuthi abantu banakho konke ongakhetha kukho kokuhamba ukuze sikwazi ukwenza lokhu ababuyeli esiminyaminyeni sezimoto nokukhungatheka ngohlelo lwethu lokuhamba.
Futhi singaqiniseka ukuthi abantu bazungeza idolobha ngokuphepha noma ngabe bakwenza kanjani.
Bangaki abagibeli bamabhayisikili abafa unyaka nonyaka e-US?
Amathrendi. Ingqikithi yama-843abagibeli bamabhayisikilizazikhonawabulawaezingozini zezimoto ngo-2019. Lokhu kusho ukwehla okungamaphesenti ama-3 ukusuka kumshayeli webhayisikili ongu-868abashonilelokho kwenzeke ngo-2018. Yize umgibeli webhayisikiliabashonilezehle ngamaphesenti ayi-16 kusukela ngo-1975, zikhuphuke ngamaphesenti angama-36 selokhu zafika ezingeni eliphansi kakhulu ngo-2010.
Mangakanani ama-bike Racks ezimoto?
Lolu hlobo lweindawo yokubeka amabhayisikiliinamathela kuzinsimbi eziwela ngaphezulu kwe-imoto. Uphahlaukukhweza ama-rack rackngokujwayelekileizindlekophakathi kuka- $ 60 no- $ 300 wokuzimelaindawo yokubeka amabhayisikili, kepha angakwaziizindlekokufika ku- $ 700 uma kuhlanganiswe kubhasikidi wezimpahla.
Ingabe iSeattle idolobha elinobungane ngebhayisikili?
Seattlengokungaguquguquki kuyenza ibe sesigabeni esiphezulu sohlu lomagazini wamabhayisikili we-BestAmadolobha EbhayisikilieMelika, futhi wathatha indawo yokuqala emazingeni e-2018.17 2019.
Kuyini ukulingana kwebhayisikili?
Ngingakusho lokhoimali yamabhayisikiliKusho ukuba nokulingana okuningi ngokuya kokuthi ngubani odala izethulo zebhayisikili nokuthi ngubani onethonyaibhayisikiliinqubomgomo, futhi ukubopha lokho okuningi kulokho okusebenzisa njengamanjeamabhayisikili, uthe. Lokho kuzoba nemiphumela ebandakanya wonke umuntu mayelana nokuthi ngubani esifuna ukumbona egibela esikhathini esizayo.
Uyini umzila webhayisikili omude kunayo yonke eFlorida?
I-umzilakusuka eCitrus Springs kuya eTrilby njengamanje yi-ende kakhulukugandayiweumzila wesitimelaesifundazweni. I-umzilaUmhubhe unqamula emadolobheni amancane, ama-ranches, i-Withlacoochee State Forest futhi usondele noMfula i-Withlacoochee.
Bangaki abashayeli bamabhayisikili asebebulewe ngo-2020?
Umagazini ongaphandle ukhonkotha i-2020 umgibeli wamabhayisikiliukufa kwabantu abangama-675 kuze kube manje, kepha lokho kumayelana nokusika kwe-COVID-19 ngo-asokuninginjengamaphesenti angama-41 izinyanga ngesikhathi, ngokusho kukaBloomberg.12.22.2020
Yisiphi isimo samabhayisikili esihle kakhulu e-United States?
(CNN) - Ngonyaka wesishiyagalombili zilandelana, iWashington yaqokwa njengezwe elilungele amabhayisikili kakhulu ezweni, kanti abanye abanjengoMassachusetts ne-Utah bakhuphuka ezikhundleni ngenxa yezinqubomgomo namasu okuxhasa ngezingqalasizinda akhuthaza abantu ukuthi bangene emabhayisikili.
Yiliphi idolobha elincane elinobungane kakhulu e-Alabama?
I-Alabama ayaziwa ukuthi ilungele ibhayisikili, futhi, empeleni, ibalwa ezansi kwamazinga akhishwa yi-League of American Bicyclists. Kepha kule minyaka embalwa edlule, idolobha lase-Auburn lenze umzamo wokubambisana wokulungisa lokhu, ngokwakha izindlela zamabhayisikili ezingamamayela angama-25 kanye nezindlela ezengeziwe ezisetshenzisiwe ezinamakhilomitha ayisikhombisa.
Ngikuphi indawo engcono yokugibela ibhayisikili eFlorida?
IYunivesithi yaseFlorida iyikhampasi elungele amabhayisikili ngokweqile, enendawo yayo eluhlaza ehamba ekolishi, kepha umdwebo omkhulu wokuhamba ngamabhayisikili kuleli dolobha elisemaphakathi neFlorida yiGainesville-Hawthorne State Trail, umzila wesitimela onamamitha ayi-10 ububanzi egandayiwe izindlela namathani wezilwane zasendle zaseFlorida nemvelo.